I-SP-USB11 120ml yemilo yoLwanyane lwezilwanyana eziBalulekileyo kwi-oyile ye-USB Aromatherapy Diffuser, China SP-USB11 120ml Cute Animal Shape Mini Ebaluleke kakhulu kwioyile yeAromatherapy Diffuser yabavelisi, abaXhasi, abaFektri - iSunpai Industries Limited
Inani Model: I-SP-USB11
Iinkcukacha zoPakethe: Amacwecwe ayi-40 / ibhokisi
I-120ml yeMilo yoLuntu yeZilwanyana eNcinci yeoyile ebalulekileyo ye-USB Aromatherapy
ISIFUNDO SE-OIL DIFFUSER & HUMIDIFIER: inokusetyenziswa njenge-aromatherapy diffuser ukuba yongeza amathontsi e-oyile ebalulekileyo emanzini; ukuba ngaphandle kweoyile, ikwasisicocisi sokugcina ukufuma kwegumbi, thintela ulusu olomileyo.
Ukutshaja kwefowuni ye-2.USB: Unxibelelwano lwe-USB, ifowuni inokuhlawuliswa xa ibhetri ifile
UKUKHANYA KWABUSUKU: Imibala eyahlukeneyo yemibala kunye nemibala engafaniyo ngombala weNdlovu wokuzonwabisa uya kudala amava amnandi kulo naliphi na igumbi lomntwana. Izibane zethu ze-LED zikhusela le yunithi ekufumaneni ukufudumala ngaphandle kwebala. Unokukhetha umbala othile okanye uwuyeke ujikeleze ngokuthe chu kuludwe lwee-hues ezimangalisayo.
UKUKHUSELEKA KWINTSAPHO YONKE: I-BPA yasimahla enendawo evaliweyo, itanki lamanzi le-4mL / i-USB Inikwe amandla (intambo ibandakanyiwe), enye yohlobo lwe-silicone ekhuselekileyo ephezulu kunye netekhnoloji ye-50 elula yokutyhala. Inxalenye yokhuseleko eyakhelwe-ngaphakathi yenza ukuba i-diffuser izicime ngokuzenzekelayo xa iphuma emanzini. Ibaleka ngokuqhubekayo kwindawo enye yokugcwalisa amanzi iiyure ezi-1-3. Phantse buthule ngenxa yetekhnoloji ye-ultrasonic.
Umthamo wenkungu 20-35ml / h
Ixesha lokugqibela 3-6hours
Ubungakanani beyunithi 165 * 77.4 * 155mm
Unit ubunzima 210g
Ubungakanani bebhokisi yemibala 167 * 80 * 157MM
ipakethe 40pieces / ibhokisi
Ubungakanani beCarton 568.5 * 42 * 34CM
NW / ibhokisi 8.5kgs
I-SP-A09 200ml yevumba elimnandi